Friday September 18, 2020 - 07:32:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Max'med Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay R/wasaare cusub umagacaabay dowladda Federaalka Soomaaliya bil kadib markii shaqada la eryay Xasan Cali kheyre.
Maxamed Xuseen Rooble oo muddo sanada ah u shaqeynayay hay'adaha Q.Midoobay ahna Qurbajoog ayaa loo magacaabay R/wasaaraha cusub kaasi oo xilka hayn doono muddo 143 maalmood ah xilligaas oo uu ku egyahay waqti xileedka Farmaajo.
57 sanan jirkan wada shaqeynta wanaagsan laleh shisheeyaha ayaa sanaddii 1963-dii ku dhashay degmada Hobyo ee gobolka Mudug, ma aheyn nin horay ugusoo jiray siyaasadda Soomaaliya balse Xasan Cali Kheyre ayuu mar lasoo shaqeeyay.
Waqtiga R/wasaare loo magacaabay Maxamed Xuseen Rooble ayaa ah waqti ay marxalad xasaasi ah marayso dowladda Federaalka mudda xileedkeeduna uu gabaabsi yahay islamarkaana ay tafaha uga dheganyihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo waxa loogu yeero beesha caalamka.
Maxbuus si lama filaan ah R/wasaare uga noqday mid kamdia wadamada qaarada Asia!